६० वटी श्रीमतीका यी हुन् एक्ला श्रीमान – Pahilo Page
६० वटी श्रीमतीका यी हुन् एक्ला श्रीमान
२६ असार । “दुई जोईको पोई कुना बसी रोई” भन्ने चर्चित नेपाली उखान हामी सबैले सुनेकै छौं । यसको तात्पर्य यो हो कि एकभन्दा बढी श्रीमतीलाई मिलाएर राख्नु फलामको चिउरा सरह हो । अझ भन्दा कुनै पनि पुरुषले एकभन्दा बढी श्रीमतीलाई मिलाएर राख्न असम्भव छ ।
यद्यपि, यही दुनियाँमा त्यस्ता मान्छे पनि छन्, जसले दुईमात्र कहाँ हो र ? पूरै ६० जना पत्नीलाई मिलाएर राखेका छन् । उनले एक्लै पनि ६० जना श्रीमतीहरुलाई मिलाएर एकसाथ राख्न सफल भएर विश्वसामु एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्राचीनकालमा एउटै मानिसका धेरै श्रीमतीहरु भएको तथ्यहरु सुन्न पाइन्छ । आधुनिक युगमा पनि ६० वटी पत्नीका पोई हुनु कुनै चानचुने कुरा होइन । हुन त यी व्यक्ति पनि चानचुने कहाँ हुन् र ? उनी परे कोन्याक आदिवासी समुदायका राजा ।
उनको नाम अंग नगोबांग हो । उनको राज्यमा कूल ७५ वटा गाउँ छन् । भारत र म्यान्मारको बीचमा पर्ने आदिवासी क्षेत्र यिनको राज्य हो । गाउँको आधा हिस्सा भारतमा र आधा हिस्सा म्यान्मारमा पर्दछ । यो राज्यका मानिसहरु म्यान्मारमा खाना खाएर भारतमा सुत्न जान्छन् भनिन्छ ।
यी राजाका छोरा म्यान्मारको सेनासँग आबद्ध छन् । यो राज्यका मानिसहरुलाई भारत र म्यान्मार दुबै देशको नागरिकता दिइएको छ । गाउँलेहरु निकै खुसी छन् ।
राजा अंग नगोबांग आफ्ना ६० जना पत्नीसाथ निकै सुखभोग गरिरहेका छन् । राजाको सबै काम प्रजाहरुले गरिदिन्छन् र रानीहरुका सबै इच्छा राजाले पूरा गरिदिन्छन् । ६० वटी पत्नीहरु पनि मिलिजुली राजाको स्याहार तथा हेरचाह गर्दै आएका छन् । राजाका हरेक इच्छा उनीहरुले पूरा गर्ने गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति : मङ्गलवार, आषाढ २६, २०७५ समय : २१:०३:२५ 673 पटक पढिएको